I-Rokua - Indlwana yekhwalithi ephezulu ngechibi lamanzi elihlanzekile - I-Airbnb
I-Rokua - Indlwana yekhwalithi ephezulu ngechibi lamanzi elihlanzekile
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Juha
U-Juha Ungumbungazi ovelele
I-Rokua Dream iyikhaya leholide elinethezekile nelihlome kahle ngasogwini lweLake Kirvesjärvi e-Rokua. Lezi zakhiwo zisezingeni eliphezulu ezitezi ezintathu ezabantu abadala abayisithupha kanye nezingane ezimbili uma kudingeka.
Woza uphumule futhi uzivocavoce phakathi nemvelo. Uma ufisa, ungathatha ukucwiliswa ku-sauna emanzini ahlanzekile kusuka kudoti lakho noma ugeze iqhwa. Lalela imisindo yemvelo ethafeni lakho.
Amasevisi erestshurenti aqhele ngamakhilomitha ambalwa. Jabulela imvelo ngenkathi uhamba ngezinyawo, ukushushuluza, ukuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngesikebhe.
Izindlu zamaholide zihlomele ngokuphelele abantu abayisishiyagalombili. Ikotishi lisogwini lwamanzi ahlanzekile, acwebile anedokodo langasese. Ikotishi linesauna eshisayo kagesi nazo zonke izinsiza zesimanje. Indawo engaphandle ye-Rokua isendaweni eseduze nendlwana.
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, Omatolasi abangu-1, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
Amakotishi azungezwe yimvelo. I-Kirvesjärvi ingamanzi ahlanzekile, anesihlabathi futhi anezinhlanzi. I-Rokua UNESCO Global Geopark iyindawo yase-Finland kuphela futhi isenyakatho kakhulu ne-Geopark emhlabeni.
I-Rokua Health & Spa iqhele ngamakhilomitha angu-3 kanti i-Rokua Hovi (indawo yokudlela) iqhele ngamakhilomitha angu-7. Bobabili banendawo yokudlela futhi bavame ukudansa ngezimpelasonto.
Uma udinga usizo noma isevisi ungangabazi ukusithinta noma nini ngoWhatsapp, ngocingo noma nge-imeyili.
UJuha Ungumbungazi ovelele